Akanjo ara-pahasalamana, akanjo ivelany, fanamiana akanjo - qiangwei
Akanjo mihaja kokoa
Hangzhou Qiangwei Clothing Co., Ltd. dia miorina ao amin'ny Hangzhou mahafinaritra, Zhejiang. Niorina tamin'ny 1997 niaraka tamin'ny renivohitra voasoratra anarana hoe 110 tapitrisa yuan. Misy maherin'ny 600 ny fitaovana ampiasaina, ary manana fitaovana fitafiana hafarana mifanaraka aminy (toy ny: milina fanjairana haingam-pandeha, milina fisaronana, hety herinaratra amerikana, sns.). Ankehitriny dia nanjary mpanamboatra akanjo matihanina mampifangaro ny endrika, ny famokarana ary ny varotra. Ny orinasa dia manana mpiasa maherin'ny 600, velarana fananganana 10.000 metatra toradroa, ary fahaiza-mamokatra 1,2 tapitrisa isan-taona. Ankoatr'izay, ny orinasa dia manana orinasa amboradara sy orinasa tsy misy fanaovan-gazety koa.